Nin 76 jir ah ayaa badbaadiyey taleefankiisa Apple Watch wuxuuna doonayaa inuu kor u qaado isticmaalkiisa wax badan | Wararka IPhone
Nin 76 jir ah ayaa badbaadiyey taleefankiisa Apple Watch wuxuuna doonayaa inuu aad u sii xoojiyo isticmaalkiisa
Cidna uma sheegi lahayn Gaston D'Aquino, halyeeyga sheekadeena maanta oo si farxad leh ku dhammaatay, in hadiyadda ay isaga siiyeen ay badbaadin doonto noloshiisa waqti ka dib. Waa saacad Apple ah. D'Aquino wuxuu ka mid yahay dadka isticmaala Apple Watch ee uu ku badbaaday saacadiisa smartwatch.
Gaston D'Aquino waa 76 jir Jabaaniis ah in uu kujiray dhacdo diimeed markii taleefankiisa Apple Watch uu ku wargaliyay in garaaca wadnihiisu uusan caadi ahayn. Halyeeygeena ayaa iska indho tiri kara digniintaan oo uu kusii wadan lahaa shaqooyinkiisa. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo uu fiicnaa oo uusan helin wax cakiran xaaladdiisa, doorbiday inuu tago dhakhtarkiisa lana tashado. Oo si wanaagsan ayuu u sameeyey, maxaa yeelay, "Waxay ahayd bambo waqtiga lagu socdo".
Ka dib markii uu ka soo qaybgalay la-talintii GP-ga, Gaston D'Aquino wuxuu u sheegay inuusan garanaynin sababta uu halkaas u joogo, laakiin Apple Watch ay u soo dirtay digniinno ku saabsan garaaca wadnahiisa. Jilaagayaga 76 jirka ah wuxuu sheeganayaa in dhakhaatiirtu u sheegeen in saacadahan ay bixiyaan akhris aad u sax ah. Markaa waxay u direen dhakhtarka wadnaha runtiina, dhibaato ayaa jirtay oo mid ka mid ah kuwa buurbuuran: wuxuu dhibaato ku qabay xididdada dhiigga wadnaha. Si aad u noqoto mid gaar ah: laba ka mid ah ayaa gebi ahaanba la xanibay kan saddexaadna wuxuu ahaa boqolkiiba 90 boqolkiiba.
Isla wiigaas waxaa lagu soo rogay a Cudurka 'Angiopathy' y ayaa haatan ku jira qaab sare. Dabcan, waa inaad taxaddartaa (waxaad ku dhacdaa sonkorow, kolestarool badan oo dhiig kar ayaa ku jira). Laakiin waxa D'Aquino go'aansaday waa inuu diro warqad ku socota Maamulaha Apple Tim Cook oo uga mahadcelinaya samaynta noocyadan ikhtiraac ee ay heli karaan dadka isticmaala Iyo in haddii ina-adeerkiis, oo bilooyin ka hor u dhintay dhibaatooyinka wadnaha, uu sidoo kale lahaa saacadda Apple, ay sidoo kale badbaadin lahayd noloshiisa.
Sidoo kale, jilaayaasheena farxadda leh ma aysan dooneynin inay ka baxaan munaasabadda si ay uga faaloodaan Tim Cook taas sii wad kor u qaadista adeegsiga Apple Watch dadka qaba dhibaatooyinka wadnaha. Tanina waa wax Apple hubaal ka heshay tan iyo xiisihii uu u qabay inuu galo waaxda caafimaadka - kana fogaado moodada - maahan wax cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Nin 76 jir ah ayaa badbaadiyey taleefankiisa Apple Watch wuxuuna doonayaa inuu aad u sii xoojiyo isticmaalkiisa
Runtu waxay tahay inaan jeclaan lahaa inaan helo mid laakiin mushaharkeygu ma ogola, inkasta oo aan sidoo kale u maleynayo inay tahay inaan helo waxoogaa madax-bannaanidooda.
"Qaabka dagaalka" ee PUBG ayaa laga heli karaa dhowaan iOS
Plasma waa nooca kiiska cusub ee iPad Pro ee ka yimid Urban Armor